Resolved Cases - May 2017
ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခြင်းနှင့် အရေးယူခြင်း ဥပဒေ
Election Guide Book for Myanmar Journalists
Resolved Cases 2017
The Press Council Members
Complaints Commission Members
What is the Myanmar Press Council?
MPC Election for Three Years Term
စဉ် နေ့စွဲ စာဝင်အမှတ် တိုင်ကြားသူလုပ်ငန်း / အဖွဲ့အစည်း အငြင်းပွားမှု/တိုင်ကြားသည့်အကြောင်းအရာ တိုင်ကြားခံရသူလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်း ဆောင်ရွက်မှု
၁ ၁၅.၅.၁၇ ၅.၆.၁၇
ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်စား (တင်ထွန်း၊ အတွင်းရေးမှူး)၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဦးဟိန်းသွင်ထက်၊ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ၊ နယူးစ်ဖက်ဒရယ်တိုင်းမ် မမှန်မကန်သတင်းထုတ်လွှင့်ဖော်ပြမှုအား အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေး News Federal Times ၏ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြသည့် “အသိပေးခြင်း။”ဟူသော ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကြောင်းကြားခြင်း။ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း။ News Federal Times Journal တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင်ကြားခံရသူ နှစ်ဘက်တို့ညှိနှိုင်းပြေလည်ပြီးဖြစ်သည်။
၂ ၁၅.၅.၁၇ ကစဝ-၂၇/၁၇ ကိုစိုးကြီး ငွေတောင်းယူနေသော သတင်းထောက်များ သူရိယအလင်းဂျာနယ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေသူ ကိုလေး ၇၄/၇၅/၇၆ သိရှိစေရန်။ တိုင်ကြားချက်မပြည်စုံသဖြင့် လိုအပ်သည့် အချက်များ ထပ်မံတောင်းဆို ရာတိုင်ကြားသူမှ လာရောက် ပေးပို့ခြင်းမရှိသဖြင့် ရုံးလက်ခံအဖြစ်သာထားရှိသည်။
၃ ၁၆.၅.၁၇ ကစဝ-၂၈/၁၇ ရဲချုပ် (ကိုယ်စား)၊ ရဲမှူးကြီးသက်နိုင် The Voice News Myanmar Website တွင် မမှန်သတင်းဖော်ပြပါရှိသည့်ကိစ္စ The Voice တိုင်ကြားသူဘက်မှ တိုင်စာအပေါ်Actioin ယူလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ အသိပေးသည့် သဘောမျိုးသာဖြစ်ကြောင်း ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြာလာသဖြင့် ရုံးလက်ခံအဖြစ်သာထားရှိသည်။
၄ ၁၇.၅.၁၇ ၈.၆.၁၇ ကစဝ-၂၉/၁၇ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (ကိုယ်စား)၊ ဦးပိုက်ထွေး၊ ဗဟိုအတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပါတီ၏ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်နစ်နာစေသည့် မမှန်မကန် ထုတ်လွှင့် ဖော်ပြမှုအား အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးရေး ကိစ္စ။
မမှန်မကန် သတင်းထုတ်လွှင့်ဖော်ပြမှုအား အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးရေး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပါတီ၏ သဘောထားပြန်ကြားခြင်း။
News Federal Times Journal တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင်ကြားခံရသူ နှစ်ဘက်တို့ ညှိနှိုင်း ပြေလည်ပြီးဖြစ်သည်။
၅ ၁၇.၅.၁၇ ကစဝ-၃၀/၁၇ ဦးသန်းဝင်း MCN (Myanmar Cable News) သတင်းဌာနမှ Vedio Journalist ဖြစ်သူ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကဒ်ပြားအမှတ် (၅/ပရန(နိုင်)၀၇၅၄၄၃၅) ကိုင်ဆောင်သူ ဒေါ်တင်မာဆွေသည် ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ ပြုမူနေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ကျေးရွာတည်ငြိမ်မှုကို ပျက်ပြားအောင် ဆောင်ရွက်နေပါ၍ အရေးယူပေးပါရန် တိုင်ကြားခြင်း။ MCN (Myanmar Cable News) ကောင်စီသို့မိတ္ထူကို ပေးပို့ခြင်းဖြစ်၍ ရုံးလက်ခံအဖြစ်သာ ထားရှိရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
၆ ၁၈.၅.၁၇ ကစဝ-၃၁/၁၇ ဦးကျော်ဇေယျ (စာရေးဆရာ) မိမိ(ဦးကျော်ဇေယျ) မရေးသောစာအုပ်ကို မိမိရေးသယောင် မရိုးမဖြောင့်သော အကြံဖြင့် လိမ်လည်အတုပြုလုပ် မိမိခွင့်ပြုချက်မရှိ ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေနေခြင်းအား အရေးယူနိုင်ရန် တိုင်ကြားခြင်း။ imyanmar house.comမှ ထုတ်ဝေသူ ဦးနေမင်းသူ တိုင်ကြားခံရသူဘက်ကိုခေါ်ယူဆွေးနွေးပြီးနောက် တိုင်ကြားခံရသူဘက်က ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် အနေအထားအား တိုင်ကြားသူထံပေးပို့သည်။
ကစဝ-၃၂/၁၇ တောင်တွင်းကြီးမြို့ ၊ ဦးထွန်းထွန်း ခြောက်လှန်ငွေတောင်းယူနေသော ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေသူ မှုခင်းသတင်းထောက်နှင့် သတင်းထောက်အယောင်ဆောင်များအား ဥပဒေအရအရေးယူပေးပါရန်။ ကောင်စီသို့တိုင်ကြားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်သို့ ပေးပို့ခြင်းဖြစ်သဖြင့် ရုံးလက်ခံအဖြစ်သာထားရှိသည်။
၈ ၂၅.၅.၁၇ ကစဝ-၃၅/၁၇ ဦးလှမင်း (သက္ကယ်ကျင်း၊တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်) အေး၊ဓါးပြတိုက်သကဲ့သို့ခြောက်လှန့်ငွေတောင်းယူသူများအား ထိရောက်စွာအရေးယူပေးပါရန်။ သတင်းမီဒီယာဥပဒေအရ အကျုံးမဝင်ပါသဖြင့် တိုင်ကြားသူထံ အကြောင်းပြန် စာပေးပို့သည်။
၉ ၂၅.၅.၁၇ ကစဝ-၃၆/၁၇ ဦးဇော်မင်းကျော် (ဒေါက်တာလှမောင်ကိုယ်စား) ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးပါရန် တိုင်ကြားခြင်း။ News Watch ဂျာနယ် သတင်းမီဒီယာကောင်စီရုံးတွင်ပင် တိုင်ကြားသူအား တိုင်ကြာခံရသူမှ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောကြား၍ တောင်းပန်ရာ နှစ်ဘက်အဆင်ပြေခဲ့ပါသည်။
၁၀ ၂၉.၅.၁၇ ကစဝ-၃၈/၁၇ The Speaker New Journal အယ်ဒီတာချုပ်၊ အွန်လိုင်းဝဏ ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးပါရန်တင်ပြခြင်း။ တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင်ကြားခံရသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းရန် စီစဉ်ပေးခဲ့ပါသည်။
Adress : No. 136 - 138 (A+B), 35 Street(Middle), Kyauktada Tws; Yangon
Telephone : 09448026326
Email : mmpresscouncil@gmail.com
What is the Press Council
Members of Complaints Commission